ဗညားဟန် – ၀ါဆိုမိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပါ ~ နော်အယ်မူးဖေါ
သီချင်းချစ်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးကိုယ်တိုင်ပြုလုပ် ထားသောဆိုဒ်လေးဖြစ်ပါတယ် သီချင်းလေးများကိုပြန်လည် စုစည်းကာ ပြန်လည်မျှဝေပေးထားတဲ့နေရာလေးပါ လာရောက်ကြသော သူငယ်ချင်းအပေါင်း သီချင်းလေးများနှင့်အတူ စိတ်၏ကျမ်းမာခြင်း ကိုယ်၏ကျမ်းမာကြပါစေလို့ နော်နော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
mi sandi --- မိုနိုပိုလီ
အေသင်ချိုဆွေ စန္ဒီမြင့်လွင် ဗီဗာဟိန်းကဗျာဘွဲ့မှူး ချစ်သုဝေ
snare ရဲ့ rapgame album မျိုးကြီး
အမှတ်တရဖြစ်စေ [ တေးရေး စိုးလင်း အနုပညာသက်တမ်း (၂၀)နှစ်ပြည့်]
အကောင်းဆုံးတေးများစုစည်းမှု သြရသ ဘာဘူ စိုးပိုင် စံလင်း+ ခင်မောင်တိုး ( ခွါညိုသက်ထား) Rocker များအတွက် ic ရဲ့ အဂ်လိပ်လိုစုစည်းမှု ခံစားချက်အပြည့်နှင့် rock သီချင်းများ ရိန်းမိုး ဂျောက်ဂျက်နောနော်ဝိုင်ဝိုင်းဘာဘူ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနိုးထကြပါတော့အပျော်မက်ရင် အသေခက်လိမ့်မယ်။( ဆရာတော် ဥုးသုမင်္ဂလတရားတော်များ)
၁. အောင်တော်မူ(၁) ၁၀-၁၂-၂၀၀၇ လက်ပန်လှ ၂. အောင်တော်မူ(၂) ၁၁-၁၂-၂၀၀၇ လက်ပန်လှ
၃. အောင်တော်မူ(၃) ၁၂-၁၂-၂၀၀၇ လက်ပန်လှ
၄. အယူနဲ့အမြင်(၁) ၁၄-၁၂-၂၀၀၇ ၅. အယူနဲ့အမြင်(၂) ၁၅-၁၂-၂၀၀၇ ၆. အယူနဲ့အမြင်(၃) ၁၆-၁၂-၂၀၀၇ ၇. အမြင်မှန်ရစေဖို့(၁) ၁၈-၁၂-၂၀၀၇ တာချီလိတ်
၈. အမြင်မှန်ရစေဖို့(၂) ၁၉-၁၂-၂၀၀၇ တာချီလိတ်
၉. အမြင်မှန်ရစေဖို့(၃) ၂၀-၁၂-၂၀၀၇ တာချီလိတ်
၁၀. ဘုံရန်သူ(၁) ၂၂-၁၂-၂၀၀၇ ရေနံချောင်း ၁၁. ဘုံရန်သူ(၂) ၂၃-၁၂-၂၀၀၇ ရေနံချောင်း
၁၂. ဘုံရန်သူ(၃) ၂၄-၁၂-၂၀၀၇ ရေနံချောင်း
၁၃. ဖြောင့်ဖြောင့်ကြည့်(၁) ၂၅-၁၂-၂၀၀၇ မင်းဘူး
၁၄. ဖြောင့်ဖြောင့်ကြည့်(၂) ၂၆-၁၂-၂၀၀၇ မင်းဘူး
၁၅. ဖြောင့်ဖြောင့်ကြည့်(၃) ၂၇-၁၂-၂၀၀၇ မင်းဘူး
၁၆. ဘယ်သူ့အတွက်လဲ(၁) ၁-၁-၂၀၀၈ ပုသိမ် ၁၇. ဘယ်သူ့အတွက်လဲ(၂) ၂-၁-၂၀၀၈ ပုသိမ်
၁၈. ဘယ်သူ့အတွက်လဲ(၃) ၃-၁-၂၀၀၈ ပုသိမ်
၁၉. မှားပြီးရင်းမှား(၁) ၅-၁-၂၀၀၈ ဘီလူးကျွန်း
၂၀. မှားပြီးရင်းမှား(၂) ၆-၁-၂၀၀၈ ဘီလူးကျွန်း
၂၁. မှားပြီးရင်းမှား(၃) ၇-၁-၂၀၀၈ ဘီလူးကျွန်း
၂၂. ထပ်မမှားစေနဲ့(၁) ၁၁-၁-၂၀၀၈ မုံရွာ ၂၃. ထပ်မမှားစေနဲ့(၂) ၁၂-၁-၂၀၀၈ မုံရွာ ၂၄. ထပ်မမှားစေနဲ့(၃) ၁၃-၁-၂၀၀၈ မုံရွာ ၂၅. ထပ်မမှားစေနဲ့(၄) ၁၄-၁-၂၀၀၈ မုံရွာ ၂၆. ထပ်မမှားစေနဲ့(၅) ၁၅-၁-၂၀၀၈ မုံရွာ ၂၇. မှန်ပါစေ (၁) ၁၆-၁-၂၀၀၈ ညောင်ဦး ၂၈. မှန်ပါစေ (၂) ၁၇-၁-၂၀၀၈ ညောင်ဦး ၂၉. မှန်ပါစေ (၃) ၁၈-၁-၂၀၀၈ ညောင်ဦး ၃၀. ဘာအကောင်ဆုံးလဲ(၁) ၁၉-၁-၂၀၀၈ ကျောက်ပန်းတောင်း ၃၁. ဘာအကောင်ဆုံးလဲ(၂) ၂၀-၁-၂၀၀၈ ကျောက်ပန်းတောင်း ၃၂. တာဝန်ယူပါ ၂၁-၁-၂၀၀၈ ကျောက်ပန်းတောင်း ၃၃. နှစ်ဘက်မြင်အော်ကြည့် ၂၂-၁-၂၀၀၈ ကျောက်ပန်းတောင်း ၃၄. တန်ရာပဲရမယ် ၂၃-၁-၂၀၀၈ ကျောက်ပန်းတောင်း ၃၅. တာဝန်သိ(၁) ၂၄-၁-၂၀၀၈ ချောက် ၃၆. တာဝန်သိ(၂) ၂၅-၁-၂၀၀၈ ချောက် ၃၇. ဘယ်လိုအားကိုးမလဲ(၁) ၂၆-၁-၂၀၀၈ ချောက် ၃၈. ဘယ်လိုအားကိုးမလဲ(၂) ၂၇-၁-၂၀၀၈ ချောက် ၃၉. ဘယ်လိုအားကိုးမလဲ(၃) ၂၈-၁-၂၀၀၈ ချောက် ၄၀. ငတုံး ၃၀-၁-၂၀၀၈ ပွင့်ဖြူ ၄၁. တစ်နေ့စာအလွဲများ ၃၀-၁-၂၀၀၈ စလင်း ၄၂. မှီရင်လှုပ် ၃၁-၁-၂၀၀၈ ပွင့်ဖြူ ၄၃. ကမ်းနားသစ်ပင်(၂) ၄-၂-၂၀၀၈ စေတုတ္တရာ ၄၄. ကမ်းနားသစ်ပင်(၃) ၅-၂-၂၀၀၈ စေတုတ္တရာ ၄၅. ကမ်းနားသစ်ပင်(၄) ၆-၂-၂၀၀၈ စေတုတ္တရာ ၄၆. ကမ်းနားသစ်ပင်(၅) ၇-၂-၂၀၀၈ စေတုတ္တရာ ၄၇. ကောက်ရိုးပဲကောင်းတယ် ၉-၂-၂၀၀၈ ပွင့်ဖြူ ၄၈. ပုဏ္ဍနှင့်ထပ်တူ ၉-၂-၂၀၀၈ ပွင့်ဖြူ ၄၉. ရတုန်းယူထား ၁၀-၂-၂၀၀၈ ပွင့်ဖြူ ၅၀. အလွယ်မလိုက်နဲ့ ၁၀-၂-၂၀၀၈ ပွင့်ဖြူ ၅၁. သူတို့အကျင့် ၁၁-၂-၂၀၀၈ ကုန်းဇောင်း ၅၂. သခင်စိတ် ၁၂-၂-၂၀၀၈ ကုန်းဇောင်း ၅၃. အားမငယ်ပါနြ့ကွယ် ၁၉-၂-၂၀၀၈ မန္တလေး ၅၄. ဓမ္မခရီးသည် ၂၀-၂-၂၀၀၈ မန္တလေး ၅၅. မကြောက်ကြေး ၂၁-၂-၂၀၀၈ မန္တလေး ၅၆. ရတနာထိုက်အောင် ၂၂-၂-၂၀၀၈ မန္တလေး ၅၇. ဒါဆိုအလွယ်လေးဘဲ (၁) ၂၃-၂-၂၀၀၈ မန္တလေး ၅၈. ဒါဆိုအလွယ်လေးဘဲ(၂) ၂၄--၂၀၀၈ မန္တလေး ၅၉. မပိတ်ခင်ကထွက် ၂၅-၂-၂၀၀၈ မန္တလေး ၆၀. တရားမမေ့နဲ့ ၂၆-၂-၂၀၀၈ မန္တလေး ၆၁. အမည်းနဲ့အဖြူ ၇-၃-၂၀၀၈ မင်္ဂလာဈေး ၆၂. ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်(၁) ၈-၃-၃၀၀၈ မင်္ဂလာဈေး ၆၃. ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်(၂) ၉-၃-၃၀၀၈ မင်္ဂလာဈေး ၆၄. သာတိဥပမာပြ(၁) ၁၀-၃-၂၀၀၈ မင်္ဂလာဈေး ၆၅. သာတိဥပမာပြ(၂) ၁၁-၃-၂၀၀၈ မင်္ဂလာဈေး ၆၆. ထိုက်တန်သူ ၁၃-၃-၀၀၈ ကန်ကြီးဒေါက် ၆၇. ရွှေပြည်အေး ၁၄-၃-၂၀၀၈ ကန်ကြီးဒေါက် ၆၈. စင်ကြယ်ကြောင်းနှင့် ညစ်နွမ်းကြောင်း ၂၂-၃-၂၀၀၈ အောင်ပန်း ၆၉. လည်ပတ်ဖြုတ်ကြ ၂၃-၃-၃၀၀၈ အောင်ပန်း ၇၀. ထူးချင်သလား ၂၄-၃-၂၀၀၈ အောင်ပန်း ၇၁. ယုံလား ၂၅-၃-၂၀၀၈ အောင်ပန်း ၇၂. မြက်ရှင်းရင်း ကျောင်ဆောက်မယ် ၂၆-၃-၂၀၀၈ အောင်ပန်း ၇၃. ဆရာတွေ့ပြီလား ၂၇-၃-၂၀၀၈ ကလော ၇၄. ဘာလုပ်မလဲ ၈-၃-၂၀၀၈ ကလော ၇၅. ဆင်ခြင်ပါ(၁) ၂၉-၃-၂၀၀၈ ကလော ၇၆. ဆင်ခြင်ပါ(၂) ၃၀-၃-၂၀၀၈ ကလော ၇၇. လမ်း ၃၁-၃-၂၀၀၈ ကလော ၇၈. အေးသာယာ ၁-၄-၂၀၀၈ အေးသာယာ ၇၉. ရန်သူ ၂-၄-၂၀၀၈ အေးသာယာ ၈၀. သတ်ပုံမှားတဲ့ည(၁) ၃-၄-၂၀၀၈ အေးသာယာ ၈၁. သတ်ပုံမှားတဲကည(၂) ၄-၄-၂၀၀၈ အေးသာယာ ၈၂. ထမင်းရှင်ကိုကြင်နာပါ ၈-၄-၂၀၀၈ အေးသာယာ ၈၃. အန္တရာယ်ကင်အောင်နေကွယ် ၉-၄-၂၀၀၈ အေးသာယာ ၈၄. ဘယ်သူ့အတွက်ပြောတာလဲ ၁၀-၄-၂၀၀၈ အေးသာယာ ၈၅. ဝိဿခနှင့် ဓမ္မဒ်န္ဒာ() ၁၂-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၈၆. ဝိဿခနှင့် ဓမ္မဒ်န္ဒာ() ၁၃-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၈၇. ဝိဿခနှင့် ဓမ္မဒ်န္ဒာ() ၁၄-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၈၈. ဝိဿခနှင့် ဓမ္မဒ်န္ဒာ() ၁၅-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၈၉. ဝိဿခနှင့် ဓမ္မဒ်န္ဒာ() ၁၆-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၉၀. ဝိဿခနှင့် ဓမ္မဒ်န္ဒာ() ၁၇-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၉၁. ဝိဿခနှင့် ဓမ္မဒ်န္ဒာ() ၁၈-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၉၂. ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်သင်တန်း(၁) ၁၃-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၉၃. ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်သင်တန်း(၂) ၁၄-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၉၄. ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်သင်တန်း(၃) ၁၅-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၉၅. ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်သင်တန်း(၄) ၁၆-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၉၆. ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်သင်တန်း(၅) ၁၇-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၉၇. ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်သင်တန်း(၆) ၁၈-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန် ၉၈. အောက်တန်းရောက်မည့်တရားများ(၁) ၂၁-၄-၂၀၀၈ ရပ်ဆောက် ၉၉. အောက်တန်းရောက်မည့်တရားများ(၂) ၂၂-၄-၂၀၀၈ ရပ်ဆောက် ၁၀၀. အောက်တန်းရောက်မည့်တရားများ(၃) ၂၃-၄-၂၀၀၈ ရပ်ဆောက် ၁၀၁. အောက်တန်းရောက်မည့်တရားများ(၄) ၂၄-၄-၂၀၀၈ ရပ်ဆောက် ၁၀၂. မြတ်သူစံ ၂၅-၄-၂၀၀၈ ပင်းတယ ၁၀၃. ဝိဇ္ဇာသုံးပါး ၂၆-၄-၂၀၀၈ ပင်းတယ ၁၀၄. ဝါဒကင်းအောင်နေ(၁) ၂၇-၄-၂၀၀၈ ပင်းတယ ၁၀၅. ဝါဒကင်းအောင်နေ(၂) ၂၈-၄-၂၀၀၈ ပင်းတယ ၁၀၆. ဝါဒကင်းအောင်နေ(၃) ၂၉-၄-၂၀၀၈ ပင်းတယ ၁၀၇. ကြောက်ခြင်းကင်းအောင် ၃၀-၄-၂၀၀၈ ပင်တယ ၁၀၈. ဂုဏ်ကျေးဇူး ၃-၅-၂၀၀၈ ပြင်ဦးလွင် ၁၀၉. ဓမ္မကျေးဇူး ၄-၅-၂၀၀၈ ပြင်ဦးလွင် ၁၁၀. ရွှေကြာပန်းလိုလန်းပါစေ ၅-၅-၂၀၀၈ ပြင်ဦးလွင် ၁၁၁. ရှိခြင်းနှင့် မရှိခြင်း(၁) ၆-၅-၂၀၀၈ ပြင်ဦးလွင် ၁၁၂. ရှိခြင်းနှင့် မရှိခြင်း(၂) ၇-၅-၂၀၀၈ ပြင်ဦးလွင် ၁၁၃. မပန်ထိုက်တဲ့ပန်း ၁၁-၅-၂၀၀၈ မိုးကုတ် ၁၁၄. မပန်ထိုက်တဲ့ပန်း ၉-၆-၂၀၀၈ ကျိုက်လတ် ၁၁၅. တွေ့အောင်ရှာ ၁၁-၆-၂၀၀၈ ၁၁၆. အကောင်းဆုံးအဖော်မွန် ၁၃-၆-၂၀၀၈ လှိုင် ၁၁၇. ဟန်လုပ်မနေနဲ့ ၁၄-၆-၂၀၀၈ လှိုင် ၁၁၈. ပိတ်ထားရုံပဲလား ၁၅-၆-၂၀၀၈ လှိုင် ၁၁၉. သဒ္ဒါနှင့်ပညာ(၁) ၁၆-၆-၂၀၀၈ ကျောက်မြောင်း ရုပ်ရှင်နှင့်သီချင်းဆိုဒ်များ
ရွှေအိုး ရွှေအိပ်မက် ရွှေမြန်မာ ရွှေဗီဒီယို
မေနှင်းအေး မဉ္ဇူရ ပန်းစကား ညကဗျာ မင်းသီလ သနပ်ခါး လိုတရ ဘားမိကလက်စစ် ခရမ်းပြာအိပ်မက် တိုက်ရိုက်ကြည့်နှိုင်သော ရုပ်ရှင်များ မြန်မာသီချင်းများ မြန်မာ MP3 မြန်မာ MP3.COM မြန်မာ MP3.NET မြန်မာ MUSIC.COM မြန်မာ LYRICS.COM မြန်မာ MOVIE.NET ထိန်လင်း ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းစုံ သစ်ထူးလွင်ဆိုက်မှ နေ့စဉ်ရုပ်ရှင်များ။ Shweo မြန်မာ၊နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းများ စကားဝါမြေတေးဥယာဉ်MP3/Flash Shweo Myanmar VCD ပန်းစကားသီးချင်းမျိုးစုံ သီချင်းအိမ် VCD/MP3 မျိုးစုံ မြန်မာPioneer ရုပ်ရှင်။ ဇာတ်ဆောင်အမည်နှင့် ရုပ်ရှင်ကားရှာရန်။ Flash Song နားဆင်ရန် Burma Network FLASHBAND MUSIC LIBRARY MMBlogs's movies Movies Links Movie 25 Let Me Watch This Online Movies Link shweo.com Movie.Net ခရမ်းပြာအိမ်မက် Shwe Dream ဇာတ်လမ်းစုံ Youtube Myanmar VCD-MP3
Myanmarsong.Net Myitzuri MP3-VCD Myanmar Mp3 Album MyanmarMp3.net Myanmar VCD music.all-channel
Myanmar Online Music MYanmar Pioneer ဝမ်း အီလဲဗမ်း-Big Bag အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်းတင်မောင်၏ ဇာတ်ထုပ်များ။ စိန်အောင်မင်း၏ မဟာဗုဒ္ဓ၀င် ဇာတ်ထုပ် Friday, June 29, 2012
ဗညားဟန် – ၀ါဆိုမိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပါ
၀၁ ။ ၀ါဆိုမိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပါ
၀၂ ။ မျက်ရည်လေးတွေပြည့်နေတဲ့ကန်
၀၃ ။ ရေပေလွှာနဲ့ကဗ္ဗည်းတင်
၀၄ ။ သင်းကွဲငှက်များနားခိုရာ
၀၅ ။ အချစ်ပေးလို့အချစ်မရသူ
၀၆ ။ လွမ်းရင်ပြန်ခဲ့ပါ
၀၇ ။ ပွင့်ဆဲပန်းတိုင်းလန်းပါစေ
၀၈ ။ ဟေမာန်ဆောင်းနဲ့အတူ
၀၉ ။ အတ္တသမားအချစ်
၁၀ ။ ရွာကျောင်းကဇတ်လမ်းလေး
Posted in: ဗညားဟန်
Connection မကောင်းသူတွေအတွက် ဒီမှာ တစ်ပုဒ်ခြင်းဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ၀၁ ။ ၀ါဆိုမိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပါ ၀၂ ။ မျက်ရည်လေးတွေပြည့်နေတဲ့ကန် ၀၃ ။ ရေပေလွှာန...
ပိုးအိစံ - သမုဒယ၀ါဆိုမိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပါ
၀၁။ ၀ါဆိုမိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပါ ၀၂။ ပန်းကောက်ခရီး ၀၃။ သံစဉ်အလှပန်းမျိုးတရာ ၀၄။ အကြင်နာသခင် ၀၅။ ကိုသာကျော်ရဲ့ချစ်ပုံပြင် ၀၆။ အချစ်ဦး...
မြန်မာ Remix သီချင်းများ
မြန်မာ Remix သီချင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဒီဂျေတွေက ကြိုးစားပြီးလုပ်ထားတဲ့ Remix လေးတွေပါ။ ဒီ Playlist ထဲမှာသီချင်းအပုဒ် ၅၀ ပါတယ်။ နားေ...
မေ့မှာပါ ဝိုင်းဝိုင်း .mp3 - လွမ်းနေဦးမယ် ဝိုင်းဝိုင်း.mp3 - ဝဋ်ကြွေ ဝိုင်းဝိုင်း.mp3 - လမင်းနဲ့ပင်လယ် ဝိုင်းဝိုင်း .mp3 - စည်း ဝိုင်းဝိ...
စိုင်းထီးဆိုင် – ဒီဇင်ဘာနံနက်ခင်း
ချစ်ပြုံးစီခြယ် ဒီဇင်ဘာနံနက်ခင်း လာချော့လှည့်တော့ကွယ် မပန်းရယ် မငိုနဲ့ မုန်းခိုင်းတိုင်းမမုန်းနိုင်ဘူး နေခြည်ထိပ်ထား နှင်းပွင့်သ...
နော်နော်ရဲ့သီချင်းထုတ်လွင့်ပေးမှု တိုက်ရိုက်နားစဉ်၇န် ဒီကိုနှိပ်လိုက်ပါ
By X Box Vs J Me
City FM 10th Anniversary- ဆက်ချစ်နေမယ် (VA)
Rocker များအတွက် IC ရဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုစုစည်းမှု
Snare ရဲ့​​ Rap Game Album
VA - မျိုးဆက်သစ်
Yangon United Football Club Songs
ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ Rock သီချင်းများ
စမာများတဲ့အညာသား (ရွှီး.....ဖွတ်) - နေကြီး Vs မိုးမွှန်
စံလင်း+ခင်မောင်တိုး ( ခွါညိုသက်ထား )
သင်္ကြန်ရက် သင်္ကြန်အခါ (Mix Tape)
အမှတ်တရဖြစ်စေ ( တေးရေး စိုးလင်း အနုပညာသက်တမ်း (၂၀)နှစ်ပြည့်)
Copyright © 2011 နော်အယ်မူးဖေါကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်